Sarkaal ka tirsanaa ciidanka milatariga oo maanta lagu dilay Magaalada Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Sarkaal ka tirsanaa ciidanka milatariga oo maanta lagu dilay Magaalada Muqdisho
Kooxo hubaysan ayaa maanta Degmada Dharkiinleey ee Gobolka Banaadir waxa ay ku dileen Sarkaal ka tirsanaa ciidamada Millateriga Dowladda Federalka Somaliya.
Dilka Sarkaalkaan ayaa waxaa ka dambeeyay Rag hubaysan oo wata Bistoolado, kuwaasi oo ka baxsaday goobtii ay ku dileen Sarkaalkaasi.
Guddoomiyaha Degmada Dharkiinleey Cumar Macoow Mayre ayaa sheegay Sarkaalka la dilay in lagu magacaabi jiray Canshuur Caraaye Subeyr oo ahaa Laba xidigle ka tirsanaa ciidanka Xoogga dalka, ayna dileen rag bistoolado ku hubeysan.
“Saaka aroortii hore ayaa Laba nin oo Bistoolado ku hubeysan waxay dileen Canshuur Caraaye oo Laba xidigle ka tirsan ciidanka xoogga dalka ah, raggii dilay wey baxsadeen, waxaana ciidamada amniga ay ku raadjoogaan dadkii dilkaasi ka dambeeyay” ayuu yiri gudoomiyaha degmada Dharkeenley.
Raggii ka dambeeyay dilka Sarkaalkaasi ayaa meesha ka baxsaday waxaana goobta yimid ciidamo ka tirsan Booliska Saldhig Galbeed oo halkaasi ka raadiyay dadkii ka dambeeyay dilka Sarkaalkaasi.
Dilalka ayaa aad ugu badan Degmada Dharkiinleey ee Magaalada Muqdisho oo todobaadkan biloowgiisa ku waabariisatay Sarkaal ciidan oo lagu toogtay meel ku dhaw halka loo yaqaan Ajabka Degmada Dharkiinleey.
Taliyaha ciidamada dalka Kenya KDF Samson Mwathethe, ayaa ciidanka dalkiisa kula hadalay makaalada kismaayo